Ogaden News Agency (ONA) – Trump oo Jabin Doono Heshiiskii Nukleerka ee Iran.
Trump oo Jabin Doono Heshiiskii Nukleerka ee Iran.
Posted by ONA Admin	/ October 7, 2017
Donald Trump, Madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa lagu wadaa inuu waxba kama jiraan kasoo qaado heshiiskii Niyukleerka ee Iran, isaga oo dib ugu celin doono aqalka Congareeska si cunaqabateyn cusub loo saaro Iran.
Masuul sare oo ka tirsan Dowlada Mareykanka ayaa sheegay in khudbad uu Trump jeedin doono todobaadka soo socdo uu ku dhawaaqi doono qorshahiisa ka dhanka ah heshiiska Niyukleerka ee Iran iyo wadamada awooda badan dhex maray sanadkii 2015 kii.
Go,aankan ayaa la sheegay inuusan gabi ahaanba burburin doonin heshiiskii 2015-ka, balse taasi badalkeeda loo wareejin doono Congareeska oo muddo 60 cisha gudahood go,aan uga gaadhi doono in Iran la saro cunaqabteyn cusub.
Burinta heshiiskan ayaa sidoo kale albaab u fureysa wadahadalo cusub oo ku saabsan heshiiska niyukleerka Iran, hase yeeshee madaxweynaha Iran Hassan Rouhani ayaa sheegay in aysan wadahadal ka geli doonin arrintani.